फिफा विश्वकप फुटबल: ३२ देशको लाग्यो टुंगो, कुन समूहमा को ? - Khabar Center
फिफा विश्वकप फुटबल: ३२ देशको लाग्यो टुंगो, कुन समूहमा को ?
१ आषाढ २०७९
काठमाडौं । सामान्यतया गर्मी मौसममा फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना हुने गर्छ । यति बेला विश्वकप फुटबलको माहोल तात्नुपर्ने थियो । तर यस पटक आयोजक रहेको कतारमा गर्मी धेरै हुने भएकाले विश्वकप जाडो महिनामा सारियो ।
कतारमा २१ नोभेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म हुने विश्वकप खेल्ने ३१ वटै टुंगो बल्ल लागेको छ । अन्तरमहादेशीय प्लेअफअन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा न्युजिल्याण्डलाई १-० ले हराएर कोस्टारिका विश्वकपमा स्थान बनाउने अन्तिम टिम बन्यो ।
कतार विश्वकपका लागि कोस्टारिकासँगै उत्तर अमेरिकाबाट चार राष्ट्र छनोट भएका छन् । यस्तै युरोपबाट सर्वाधिक १३ राष्ट्र छनोट हुँदा एसियाबाट पहिलो पटक ६ राष्ट्रले विश्वकप खेल्दैछन् । अफ्रिकाबाट ५ र दक्षिण अमेरिकाबाट ४ राष्ट्र विश्वकपमा छनोट भएका छन् ।
२२औं संस्करणको पिफा विश्वकप कतारको ५ सहरको ८ मैदानमा खेलाइनेछ । उद्घाटन खेल समूह ‘ए’ मा रहेका नेदरल्यण्ड्स र सेनेगलबीच हुनेछ ।
कुन समूहमा कुन टिम?
प्रकाशित मिति :आषाढ १ २०७९ बुधवार - १२:३१:४१ बजे
लगातार तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल टी-२० च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा
ओमानविरुद्ध नेपालको सहज जित
नेपाल सुपर लिग गर्न एन्फाले दियो स्वीकृति